Ahoana ny fomba hamohana ny bootloader HTC anao amin'ny alàlan'ny HTCdev | Androidsis
Ahoana ny fomba hamohana ny bootloader an'ny terminal HTC marobe miaraka amin'ny HTCdev
Vohay ny bootloader amin'ny terminal HTC be dia be, dia tsio-drivotra miaraka amin'ny tranokala HTCdev.
HTCdev dia fitaovana an-tserasera, izay hanampy antsika amin'ny famoahana ny bootloader an'ny HTC, afaka misafidy amin'ny be dia be fitaovana mifanentana avy amin'ny lisitra mihabetsaka.
Manaraka izany dia hitari-dàlana anao amin'ny fizotrako aho hanaraka ny pejy web voalaza etsy ambony, miaraka amin'ny valiny farany amin'ny fampidinana ny fitaovana ilaina amin'ny mamoha ny bootloader terminal voafantina.
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny miditra amin'ny tranokala HTCdev ary misoratra anarana, rehefa voasoratra ara-panjakana dia handefa mailaka miaraka aminay ry zareo rohy fanamarinana, izay tsy maintsy tsindrio ampandehano ny fisoratanay.
Raha vantany vao navadika ny fisoratana anarana dia hiditra ao amin'ny Tranokala HTVdev ary hampahafantatra ny tenantsika amin'ny fampiasana ny anarana sy ny tenimiafinaRaha vantany vao vita io dia afaka manomboka amin'ny torolàlana ho an'ity tranonkala ity izahay.
ny fomba fampiasana HTCdev tsikelikely
Avy amin'ny pejin'ny pejy HTCdev, hofidintsika ny safidy nomeko marika mainty, Sokafy ny bootloader, dia hahita efijery toy ilay ampiarahiko etsy ambany izahay.
Ao amin'ity efijery vaovao ity no hifidianantsika ny safidy hanomboka, izay ao anatin'ny bokotra maitso oval.
Amin'ity efijery vaovao ity dia tsindrio ny zana-tsipìka Safidio ny fitaovanao ka hisy a sakafo atsipy izay ahafahantsika misafidy ny maodeliko HTC.
Raha tsy ho hita ao anaty lisitra midina ny maodelintsika dia midika izany fa ny fomba HTCdev tsy mifanaraka amin'ny terminal misy antsika izao.
Vantany vao voafantina ny terminal antsika, dia tsindrio ny bokotra Atombohy hamaha ny Bootloader, dia hiseho amintsika io efijery fampitandremana izay mampitandrina antsika ny amin'ny vokatry ny famohana ny bootloader an'ny HTC.
Tsy maintsy manisy marika ny boaty fanamarinana roa hanaiky ny fampandrenesana, ary avy eo tsindrio ny bokotra izay miseho etsy ambany.
Ao amin'ny pejy manaraka, HTCdev, dia hampandre anay anaty boaty eo ankavanana, amin'ireo programa izay tsy maintsy napetrakay ka ilay fitaovana mamoha izay ampidinintsika dia mandeha amin'ny fomba marina.
Ny fitaovana dia ny Android SDK, ny Java Runtime Environment ary ny HTC SyncRaha tsy apetrakao izy ireo dia tsy maintsy apetrakao alohan'ny hanohizana ny fizotry ny fampidinana ny fitaovana mamoha bootloader.
Pejy fitaovana sy fampidinana Bootloader ao amin'ny HTCdev
Raha vantany vao tafapetraka ny zava-drehetra dia afaka manohy miaraka isika ny fizotran'ny fampidirana fitaovana mamohaMba hanaovana izany, ao amin'ny lisitra vaovao izay hiseho etsy ambany, dia tsindrio ny bokotra marary mitsika mifanentana indrindra amin'ny terminal efa voafantina teo aloha.
Safidio ny fisintomana araka ny maodely amin'ny HTCdev
Misafidiana modely handefasana fitaovana
Vantany vao voafidy avy amin'ny lisitra ny maodely tsindrio eo amin'ny bokotra fampidinana, hanomboka ny rakitra misintona ho azyHiandry ny famaranana azy izahay ary hanatanteraka azy, hanome alalana anao raha mangataka azy ireo ianao.
Vantany vao novonoina ny fisie nakana azy dia hiseho ny varavarankely toa ity manaraka ity:
ankehitriny homarihinay ny boaty ary tsindrio ny bokotra Manaraka.
Amin'ny efijery manaraka, mampitandrina antsika ny programa fa mila manao izany isika ampifandraiso amin'ny alàlan'ny usb amin'ny solosaina ny fitaovana, Manome antsika famantarana ihany koa izany ka andao ialantsika ny fahatapahan-jiro mandritra ny dingan'ny famohana, manoro hevitra antsika fa tsy tokony hikasika na inona na inona isika mandritra ny fizotrany, ary koa ny tokony hataontsika manakana ny solosaintsika tsy handeha hatory na amin'ny Stand By.
Alohan'ny hampifandraisana ny fitaovantsika dia tsy maintsy mijery avy ao amin'ny menio fanovana mitovy amin'izany, fa nampiasainay tsara ny safidy an'ny Famafana USB izany dia ao anatin'ny menio. fanovana, fampiharana, fampandrosoana.
Raha vantany vao voamarina ireo rehetra ireo dia hataonay antoka fa ny HTC dia manana bateria mihoatra ny 30%, homarihinay ny boaty fanamarinana ny programa mamoha bootloader, ary tsindrio ny bokotra Manaraka.
Haka efijery iray isika mitady ny fifandraisana amin'ny terminal, avy eo a efijery fandrosoana fametrahana, ary farany efijery iray izay hilaza amintsika fa tonga lafatra ny zava-drehetra, izay tokony hisafidianantsika ilay safidy Fivoahana.
Miaraka amin'izany sahady hanana ny bootloader an'ny terminal HTC nosokafantsika isika, raha te hahalala raha iray amin'ireo fitaovana mifanentana aminao ny fitaovanao, mila mandalo ny tranokalan'ny HTCdev ary zahao amin'ny lisitr'ireo fitaovana mifanaraka aminy.
Fanazavana fanampiny - HTC Ville C vaovao, kinova ekonomika an'ny One S
Loharano - HTCdev
Sary - HTCdev
Fampidinana - Android SDK, Java Runtime Environment, HTC Sync
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » HTC » Ahoana ny fomba hamohana ny bootloader an'ny terminal HTC marobe miaraka amin'ny HTCdev
Rafa indi dia hoy izy:
Salama, azonao atao ve ny milaza amiko hoe inona ilay programa?
Valiny tamin'i Rafa Indi
Juan Carlos G. dia hoy izy:
Ho an'ny dingana fampidinana ny fitaovana mamoha amin'ny terminal; Ahoana no ahafantarako izay kinova tokony alaiko?
Valiny tamin'i Juan Carlos G
Raha vantany vao miditra amin'ny tranokala HTCdev ianao,
misoratra anarana ianao ary misafidy ny terminal anao,
amin'ny dingana farany azonao lisitra
miaraka amin'ny maodelin'ny terminal anao ary
kinova rehetra misy.
Abdedaim El Achhab El Kheffa dia hoy izy:
tngo ny telefaona mihidy avy amin'ny mpandraharaha volomboasary, azoko atao ve ny manala an'io hidin-trano io ary mametraka Android amin'ny 0? Faniriana htc no azoko valiana azafady
Valiny tamin'i Abdedaim El Achhab El Kheffa
Hphtats dia hoy izy:
Salama, nanaraka ny dingana rehetra aho, fa tsy namoha azy io. Rehefa vita dia apetrako ity: (ny dikan'ny ROM dia tsy tohanana, fa tsy maintsy iray andro alohan'ny hanohana azy. Hahazo fampandrenesana ianao hanavao ny telefaona miaraka amina kaody rom farany. Rehefa avy nanavao ianao dia tantano ny RUU indray hanavao ny fiandohana hamaha ny telefaona. Miala tsiny izahay noho ny fanelingelenana.
Mamaly an'i Hftatos
Salama Salama maraina, mitovy amiko ihany no nahazo ahy. Ahoana no namahanao azy? Wilfire A3333.
sandra petite dia hoy izy:
Salama, manana fisalasalana aho,
Mijery ny lisitra aho, ary satria nohavaoziko ny kinova rindrambaiko dia manome isa ahy izy, izany ve ilay mila jereko amin'ilay lisitra sy alaina?
Valiny tamin'i Sandra Petita
leo96xd dia hoy izy:
miasa ho an'ny sony ericcson live wt19 ??
Mamaly an'i Leo96xd
atyka dia hoy izy:
Salama, manana faniriana htc aho c, ahoana no hahafantarako izay rom tsy maintsy raisiko ???
Mamaly an'i atyka
Rodorti dia hoy izy:
Salama, manana maodely cobalt HTC PG05100 aho. Tsy hitako ilay modely ao amin'ny lisitra HTCdev. Midika ve izany fa tsy azo vohana?
Valiny tamin'i Rodorti
kristianina dgz dia hoy izy:
ahoana no ampidirako ny ruu ho an'ny mpanondrana htc
Valio i christian dgz
Hey, raha avy any Mexico aho, malemy ny maodely, tsy manampy izany, mamoy fo aho.
Avy any Mexico aho, tsy haiko raha nahavita namaha ny bootloader ianao, ny mailaka nataoko 666black @@ Hotmail.es
maguiber dia hoy izy:
Salama, tonga amin'ny dingana 12 aho ary avy eo dia tsy mandalo, mandika an'ity aho ary tsy misy flashboot unlocktoken Unlock_code.bin.
Inona no azoko atao na aiza ny lesoka, misaotra
Mamaly an'i maguiber
Sento dia hoy izy:
Salama, rehefa tonga amin'ny dingana faha-9 amin'ny fanaovana kopia "fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin" aho dia mahazo lesoka. Avy eo avelako copie-paste izay miseho amiko
manoratra 'unlocktoken' ...
FAILED (lavitra: tsy nahomby ny fizahana famantarana token)
vita. fotoana feno: 0.230s
Raha misy manana ny valiny dia alefaso azafady.
Mamaly an'i Sento
eny, ny selako dia htc iray x an'ny original (4 cores ary tegra3)
Tsy noforonina ireo lahatahiry, inona no lesoka?
feo dia hoy izy:
tsy mamoha bootloader izany !!! dia ny fametrahana ny kinova an'ny ROM hamaha azy avy eo ... tandremo ireo charlatans ireo!
Mamaly an'i soares
Salama nahavita namoaka faniriana htc aho nivoaka nivoaka tsy voahidy tao anaty menio miafina nefa mbola nilaza tamiko foana ny tambajotra nanakana izay azoko atao
Salama ... mila fanampiana aho azafady ... tsy nahy nanakana ny bootloader an'ny htc one m7 aho, manandrana mamoha azy amin'ny htcdev fa amin'ny farany rehefa mandefa azy aho dia mahazo bug tsy haiko intsony izay hatao. ...
Miezaka mamono telefaona aho fa mandefa ahy hatrany amin'ny maody reboot, tsy mamela ahy hanao na inona na inona ,,, ary mametraka ahy *** RELOCKED ***
*** fampitandremana fiarovana *** Azafady mba lazao amiko raha manana vahaolana ianao ary inona no tokony hataoko ...
Mialoha dia misaotra betsaka ..